रेशम: डाटा र स्प्रेडशीटलाई प्रकाशित दृश्यहरूमा परिवर्तन गर्नुहोस् Martech Zone
आइतबार, जुलाई 19, 2015 आइतबार, जुलाई 19, 2015 Douglas Karr
के तपाईंसँग कहिल्यै स्प्रिडशिट छ कि डाटाको एक शानदार संग्रह थियो र तपाईं केवल यसलाई कल्पना गर्न चाहानुहुन्छ - तर एक्सेल भित्र निर्मित चार्टहरू परीक्षण र अनुकूलन गर्न धेरै गाह्रो र समय खपत हुने थियो? के हुन्छ यदि तपाईं डाटा थप्न चाहानुहुन्छ, प्रबन्ध गर्नुहोस्, अपलोड गर्नुहोस् र ती दृश्यहरू साझा गर्नुहोस्?
तपाईं संग गर्न सक्नुहुन्छ सिल्क। रेशम डाटा प्रकाशन मञ्च हो।
रेशमले एउटा विशेष शीर्षकमा डाटा समावेश गर्दछ। जो कोहीले डेटा खोजी गर्न र सुन्दर अन्तर्क्रियात्मक चार्टहरू, नक्सा र वेब पृष्ठहरू सिर्जना गर्न रेशम ब्राउज गर्न सक्दछन्। आज सम्म, लाखौं रेशम पृष्ठहरू सिर्जना गरिएका छन्।
यहाँ एक उदाहरण छ
भ्रमणको शीर्ष १ Big ठूला सामाजिक नेटवर्कहरू यस डेटा संग्रहबाट सिर्जना गरिएको दृश्यहरू हेर्न, साझेदारी गर्न वा इम्बेड गर्न सिल्क। यहाँ प्रयोगकर्ता तथ्या of्कको एक पट्टी चार्टको लाइभ इम्बेड छ:
बाट डाटा বৃহত্তম-social-networks.silk.co
कागजातहरू अन्तर्क्रियात्मक बनाउनुहोस् - स्थिर पीडीएफ, स्प्रेडशिट वा गुगल डक्सबाट लिंक पठाउनुको सट्टा, पूर्ण रूपले अन्तर्क्रियात्मक साइट बनाउन सिल्क प्रयोग गर्नुहोस् जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई संलग्न गर्दछ र तिनीहरूलाई तपाईंको डाटासँग खेल्न प्रोत्साहित गर्दछ।
अन्तर्क्रियात्मक डेटा कहीं पनि एम्बेड गर्नुहोस् - तपाईंको रेशम दृश्यहरू लिनुहोस् र ती सबै वेबमा प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई Tumblr, WordPress, र धेरै अन्य प्रकाशन प्लेटफर्महरूमा इम्बेड गर्नुहोस्।
ट्याग थप्नुहोस् तपाईंको कार्यलाई मध्यम, शैली, वा तपाईंले छनौट गरेको कुनै कोटीबाट क्रमबद्ध गर्न। स्थान डाटा थपेर, तपाईं नक्शा पनि निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ।
राख्नु सिल्क प्रयोग गर्नका लागि, मैले यसमा हाम्रा कुञ्जीशब्द श्रेणी निर्धारण गरे Semrush र द्रुत रूपमा एक भिजुअलाइजेशन निर्माण गरियो जसले मलाई क्रमबद्ध गर्न दिनुहोस् र कुञ्जी शव्दहरू हेर्न दिनुहोस् जहाँ मसँग केही उच्च श्रेणीकरणहरू थिए र त्यहाँ खोज मात्राको एक टन थियो ... मूलतः मलाई थाहा दिनुहोस् जहाँ केही अप्टिमाइजेसन र पदोन्नतिले धेरै बढी यातायात चलाउन सक्छ। मैले यो डाटा क्रमबद्ध गरेर फिल्टर गरेर गर्न सक्दछु ... तर दृश्यले निश्चित रूपले यसलाई अझ बढि बनायो!
टैग: डाटा प्रकाशनडाटा प्रकाशन प्लेटफर्मडेटा दृष्टिकरणडाटा दृश्य प्लेटफर्मरेशमरेशम
सामाजिक मीडिया पेशेवरहरु सत्य ह्यान्डल गर्न सक्दैन